ရှညောသား: February 2019
သူ့ကိုထမင်းစားပြီးပြီလားမေးတော့စားပြီးပြီတမာရွက်ပြုတ်နဲ့အလင်ဟင်း(ထန်းရည်ခါးလုပ်ယူပြီးကျန်တဲ့အနည်) နဲ့စားတယ်တဲ့။နွေဦးပေါက်ခါစတမာရွက်တွေနုတဲ့အချိန်တမာရွက်ပြုတ်နဲ့အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ဟင်းတခွက်ပေါ့။ ချဉ်ဆိမ့်ဆိမ့်အရသာနဲ့စားလို့အလွန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီကနေတမာရွက်အကြောင်းဆက်ပြောဖြစ်ကြတယ်။
ဒီနှစ်ရွာမှာတမာရွက်ဈေးကောင်းတာတပိဿာကို ၄၀၀၀ ကျော် ၅၀၀၀ ထိရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိတယ်။ ရွာကလူတွေတမာရွက်ခူးရောင်းပြီးဝင်ငွေတိုးတာပေါ့။တမာပင်ပေါတဲ့ဒေသမို့တောထဲတမာရွက်ထွက်ခူးရင်
၄၀၀၀ ကျော် ၅၀၀၀ လောက်ထိဈေးရှိနေတာဝယ်ယူစားသုံးသူတွေများလို့ပေါ့။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, February 10, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘလော့ဂါ (၈) နှစ်ပြည့်
image credit ....google
ဘာလိုလိုနဲ့ဒီဘလော့လေးအစပြုခဲ့တာအခုဆို (၈)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဗျာ။ စစချင်းတုန်းကတော့ဘလော့ဂါတွေခေတ်စားချိန်မို့
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျနော့်အိမ်လေးဆီကို (၈) နှစ်တာရောက်သည်အထိ
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, February 05, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
photo credit >>>> google image
photo credit >>>>> google images
သာမကတတ်မှရှိမယ်သူများကတာကိုတော့ လက်မကျိုးတာရော ခါးမပါတာရော နောက်ဆုံးမင်းသမီး
ပျော်ရတာ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုကလည်း နေ့ခင်းဆိုပူ ညပိုင်းဆိုချမ်း ရိုးပြတ်တောတွေ
တလင်းပြင်မှာကောက်ရိုးပုံတွေ ပြောင်းရိုးပုံတွေနဲ့ သစ်ရွက်တွေကြွေစ နွေရာသီမရောက်ခင်အချိန်ပေါ့။
ဆန်ကြမ်းကိုအချိုအဆညီအောင်ရောပြီးမောင်းစင်မှာထောင်းကြရတယ်။ရလာတဲ့မုန့်မှုန့်ကိုရေနဲ့အနေတော် မပျစ်မကျဲဖျော်ပြီးအဝကျယ်မြေဖျင်းအိုးထဲကိုရေတဝက်ကျော်ထည့်ပိတ်ဖြူစသို့မဟုတ်ဖဲထီးစအရွက်တွေနဲ့အိုးဝ မှာတင်းနေအောင်စည်းပြီးမီးဖိုပေါ်မှာတည်အထဲကရေဆူလို့အငွေ့တက်လာပြီဆိုရင်ဖျော်ထားတဲ့မုန့်နှစ်ရည်
မနက်ပိုင်းမှာတော့ထမင်းချက်ဖို့အတွက်ဆန်ကိုတစ်အိမ်နှစ်ပြည်ကျဆီဝေပါတယ်။အလှူကြီးနေ့မနက်ဆို ထမင်းချက်ပြီးထမင်းကျွေးရုံကိုလာပို့ပေးကြတယ်။အဲ့ဒါလည်းအရင်တုန်းကဓလေ့ပါ။အခုနောက်ပိုင်းတော့ ထမင်းပေါင်းတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်လာလို့ထမင်းပေါင်းငှားကြပါတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 02, 20190comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook